के अक्षय कुमार समलिङ्गी हुन ? ट्वीङ्कलले अस्पतालनै लगिन् - Everest Dainik - News from Nepal
के अक्षय कुमार समलिङ्गी हुन ? ट्वीङ्कलले अस्पतालनै लगिन्
मुम्बई, माघ ५ । अक्षय कुमारको धेरै चर्चा पाएको फिल्म ‘प्याडमेन’ यहि २५ जनवरीमा रिलिज हुदैछ । समाजिक समस्यामा केन्द्रीय रहेर बनाइएको यो फिल्म सफल हुने आश गरिएको छ ।
यस अघि उनको ‘ट्वाइलेटः एक प्रेमकथा’ आएको थियो । जुन बक्सअफिसमा ब्लकबस्टर नै बन्यो ।
उनको व्यक्तिगत जीवन पनि सफल छ । बिहे भएको १७ वर्ष पुगेको छ । १७ जनवरी, २००१ मा ट्वीन्कल खन्नासँग बिहे भएको थियो । तथापि, बिहे अघि ट्वीन्कलकी आमा डिम्पलका उनका विषयमा सकारात्मक नरहेको एक ‘टक सो’ मा बताएका थिए ।
करन जोहरको ‘कफि विथ करन’मा अक्षय कुमार र ट्वीन्कलले निजी जीवनका विषयमा नयाँ खुलासा गरेका थिए । ट्वीन्लककी आमा डिम्पल अक्षय कुमारलाई समलिङ्गी ठान्ने गरेको उनले बताएकी थिइन् ।
ट्वीन्कलले भनेकी थिइन, “अक्षयकी एकजना पत्रकार साथीले उनी समलिङ्गी भएको आमालाई सुनाएकी थिइन् । त्यसैले आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।”
त्यसपछि अक्षयका विषयमा सोधपुछ गरियो । त्यस्तो नभएपछि बिहे भएको थियो । बिहेपछि पनि ट्वीन्कलले अक्षयलाई अस्पताल पु¥याएकी थिइ । अस्पतालमा बच्चा जन्माउनका लागि सक्षम छन कि छैनन् भनेर जाँच गरिएको थियो । त्यसमा उनी सफल निक्ले ।